IBC 2019 တွင် Grass Valley နှင့် NEP UK တို့၏ IP စွမ်းအားကိုပြသမည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » မြက်ချိုင့်နှင့် NEP ဗြိတိန် IBC 2019 မှာအိုင်ပီရဲ့ Power ခင်းကျင်းပြပေးပါရန်
Montreal - 8: 00 CET 10 စက်တင်ဘာလ, 2019 - မြက်ချိုင့် နှင့် NEP ရဲ့ဗြိတိန်ဌာနခွဲ ပြင်ပထုတ်လွှင့်အတွက် IP ကိုအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အစွမ်းသတ္တိကို (OB) ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်မှာသရုပ်ပြ IBC 2019 မှာပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ်။ NEP ဗြိတိန်ရဲ့ Ceres ထရပ်ကား IBC ဧည့်သည်များကဒီအခြေခံစံနှုန်းအတွင်းပိုင်း All-IP ကို ​​OB ထရပ်ကားရ Ceres ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ optimized ဘယ်လိုဦးပထမဦးဆုံးလက်သင်ယူဖို့ထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းပေးခြင်းဟာ RAI, အမ်စတာဒမ်မှာမြက်ချိုင့်တဲ (9.A01) မှာခင်းကျင်းပြသပါလိမ့်မည် ဒီနေ့ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်မှာအရေးပါဖြစ်ကြောင်းအပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏မြင့်မား။ အများအားအဓိကဖြစ်ရပ်များ, အားကစားလ်တာနှင့်အခြားအကြီးစားဘဏ်ဍာမှာအသုံးပြု NEP Ceres ပွင့်လင်းစံချိန်စံညွှန်းများပေါ်တွင်တည်ဆောက်သည် featuring SMPTE အဆိုပါထရပ်ကားတလျှောက်လုံး ST2110 ဆက်သွယ်မှု။
မည်သည့်စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ - စားသုံးသူအချိန်မရွေးအရည်အသွေးမြင့်တောင်းဆိုသည့်အတိုင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုအကြောင်းအရာ, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတွေဟာအဲဒီမှာဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့ကောင်းသောဖြစ်ကြောင်းကြွယ်ဝသော, စွဲငြိဖွယ်ရာမြင်ကွင်းအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကိုတုံ့ပြန်ရမည်ဖြစ်သည်။ Ceres ၏စိတ်နှလုံးမှာမြက်ချိုင့်ဖွင့်ရပ်တည် Kahuna ထုတ်လုပ်မှု switcher၎င်း၏လက်မှတ် Multi-format နဲ့စွမ်းရည်ထုတ်လုပ်မှုပုံစံ၏ဖန်တီးမှုပါဝါမသက်ဆိုင်ဘဲမူလကမ်းလှမ်းအတူ။ ဖြစ်စေ HD သို့မဟုတ် UHD, SDI သို့မဟုတ် IP, HDR သို့မဟုတ် SDR ဒါမှမဟုတ် hybrid ပတ်ဝန်းကျင်မှာ, Kahuna တီထွင်ဖန်တီးမှုသို့မဟုတ်အရည်အသွေးပေါ်မျှအပေးအယူသေချာ။
IBC 2019 မှဧည့်သည်များ Ceres နေဆဲအလိုလိုသိစစ်ဆင်ရေးစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်လုပ်နေချိန်မှာ shader ကိုပိုပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့် ပို. ပင်ဖန်တီးမှုအလားအလာလွှတ်ပေးသောကို Creative grade ဖြေရှင်းချက်အနိုင်ရဇာတိ LDX 86N 4K ကင်မရာများနှင့်ဆုချီးမြှင့်၏မြက်ချိုင့်ရဲ့အကွာအဝေးနှင့်အတူလည်ပတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည် ပုံရိပ်တွေ။ မြက်ချိုင့်ရဲ့အစွမ်းထက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပျေါလှငျနဲ့ပြန်ကန်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်, LiveTouchကိုလည်းပြသမှာ Ceres onboard ဖြစ်လိမ့်မည်။
"ချွေနှင့်ဒဏ်ခံထုတ်လုပ်မှု Workflows ထုတ်လုပ်မှုကို formats တစ်ခုကျယ်ပြန့်အနှံ့အကြောင်းအရာပေးပို့ချောမွေ့နှင့်စပ်ရာမရှိသောအောင်ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အိုင်ပီဒီလိုအပ်ချက်မရှိစေရန်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး, ဤ Ceres ပေါ်တွင်တည်ဆောက်သောအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ် "ရော့နယူတန်, အင်ဂျင်နီယာနှင့်နည်းပညာဒါရိုက်တာ NEP ဗြိတိန် & အိုင်ယာလန်ကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ကအတိတ်ကာလအတော်ကြာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စီမံကိန်းများအပေါ်ပူးပေါင်းပြီးလျှင်မြက်ချိုင့်နဲ့ကာလကြာရှည်ဆက်ဆံရေးရှိသည် - အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်နိုင်သည်ကိုငါတို့သည်ကျနော်တို့တောင်းဆိုသည့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ကြံ့ခိုင်ဖြေရှင်းချက်ပို့အတွက်ပွိုဖြစ်ပါတယ်သင်တို့သိကြ၏။ ကျနော်တို့စံချိန်စံညွှန်းများ-based IP ကိုယနေ့နှင့်မနက်ဖြန်ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်များကိုကူညီပံ့ပိုးရန် OB ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ပွင့်လင်းသရုပ်ပြ IBC မှာမြက်ချိုင့်နှင့်အတူပူးပေါင်းဝမ်းသာပါတယ်။ "
NEP Ceres အပါအဝင်လည်းမြက်ချိုင့်နည်းပညာ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးမှနေရာဖြစ်သည် သင်္ဘော MV-820-IP ကိုမြင်ကွင်းစုံ, UHD-1100 KudosProprocessors, အိုင်ကျူရွေ့ပြောင်း, audio တိုက်ရိုက် နှင့် Vegas Router အားလုံးပြပွဲကာလအတွင်းစစ်ဆင်ရေးဖြစ်လတံ့သော SDI လမ်းကြောင်းသည်။ အဆိုပါထရပ်ကားအားလုံးအဓိကအိုင်ပီအပြောင်းအလဲနဲ့လည်း Arista ထံမှ switching COTS ကထောက်ခံမြက်ချိုင့်ဖြေရှင်းနည်းများဖြင့်ကိုင်တွယ်နေပါတယ်။
အလုပ်လုပ်၏ဤလမ်း, အလေးချိန်ကိုလျှော့ချစကေးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် 4K UHD / HDR ကိုထောကျပံ့ဖို့ proofing format ကို Agnostic အနာဂတ်များကိုကူညီပေးသည်အဖြစ် "ဒီ OB ကဏ္ဍအိုင်ပီများထားရှိအတွက် uptick ၏အမှန်တကယ်အကျိုးခံစားခွင့်ဖြစ်ပါသည်။ မြက်ချိုင့်မှာကျွန်တော်ဖောက်သည် '' တိကျသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်အစွမ်းထက်ပုံပြင်များပြောပြရန်စွမ်းရည်နှင့်သူတို့ကိုပေးချုပ်လုပ် IP ကိုဖြေရှင်းချက်ပို့ဆောင်အပေါ်ကိုယျ့ကိုယျကိုဂုဏ်ယူ, "မာကုဟီလ်တန်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, မြက်ချိုင့် commented ။ "ကျနော်တို့က IP ကို-based OB အခြေခံအဆောက်အအုံပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ UHD HDR ထုတ်လုပ်မှု၏အနာဂတ်ဆီသို့ဦးတည် ပို. ပို. ရှုပ်ထွေးသောဘဏ်ဍာနှင့်ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်ကူညီပေးနေနေကြသည်ကိုဘယ်လိုဧည့်သည်ကိုပြသ IBC 2019 မှာ NEP ဗြိတိန်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်သရုပ်ပြဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
မြက်ချိုင့်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်းကိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး grassvalley.com။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း NEP ရဲ့ဖြေရှင်းချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလည်အပတ်ခရီးပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် nepgroup.com.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ FOR-A, မူကွဲစနစ်များ, ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-10
ယခင်: IBC မှာမိတ်ဆက်အဆင့်မြင့်ထူးခြားချက်များစက်ရုပ်အောကျခံခုံမှရွှေ့လျားစှမျး Add, ထိုဇုန်အတွက် Shotoku ရဲ့ TR-XT ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်ထားပါ, နှင့်၎င်း၏မျက်နှာကျက်တပ်ဆင်ထားရထားစနစ်အဘို့ခေါင်မိုးဖိအားပေးရန်
နောက်တစ်ခု: ယခု Google မှမိုးတိမ်ပလက်ဖောင်းပေါ်ချထား Make.TV တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုတိမ်တိုက်